Ny ankamaroantsika dia efa namaky tanteraka Resadresaka mitanjaka, ny sasany dia an-dàlana namakivaky azy io, ary ny sasany kosa nampihatra ny sasany tamin'ireo fitaovana avy ao amin'ilay boky. Azon'ireo mpiara-miasa amiko atao ny misafidy malalaka raha te hanana izy ireo, saingy ity ny fahitako ny fisakafoanana atoandro, ny hevitra momba ilay boky, ary koa ny fanaovana bilaogy amin'ny ankapobeny:
Ny mpanjifanao dia hiresaka miaraka aminao na tsy misy anao. Maninona raha manandrana mifehy ny làlan'io resaka io amin'ny alalàn'ny voalohany mitoraka bilaogy momba izany? Misy seha-pifanakalozan-kevitra miandry ny fanontanian'ny mpanjifanao. Ny bilaogy no fotoana ahafahanao maneho hevitra alohan'ny anontaniana azy.
Tsy misy dikany ny politikan'ny bilaogy. Rehefa mitoraka bilaogy ny mpiasa, ny manisy lahatsoratra tsy mendrika dia tsy manimba kokoa noho ny milaza izany amin'ny mailaka, na amin'ny telefaona, na amin'ny resaka. Ny mpiasa dia tompon'andraikitra amin'izay lazainy amin'ny alàlan'ny fampitaovana. Raha bilaogera ianao… rehefa miahanahana ianao dia manontania! (Ohatra: Tsy nangataka alalana tamin'ilay vondrona aho raha afaka mitanisa ny anaran'izy ireo, ny orinasan'izy ireo, ny fanehoan-kevitr'izy ireo, sns. Ka tsy handeha eto aho)
Mora ny mitoraka bilaogy, saingy tsy maintsy mianatra mampiasa ny teknolojia ao ambadiky ny bilaoginao ianao… RSS, rohy, trackback, ping, hevitra sns.
Raha apetraka ho toy ny paikady ny fanaovana bilaogy, inona no tambiny amin'ny fampiasam-bola? Dinika mahasalama izany. Heveriko fa ny marimaritra iraisana ankapobeny dia ny tsy safidy intsony izay tokony hanombanana ny fiverenana amin'ny fampanjariam-bola… fangatahana sy andrasana avy amin'ny mpanjifanao ny manokatra ireo lalam-pifandraisana ireo. Raha tsy izany dia handeha any an-kafa fotsiny izy ireo!
Raha matihanina amin'ny varotra, marketing na teknolojia any amin'ny faritra Indianapolis ianao ary te-hiaraka aminay ho an'ny Book Club anay, dia misorata anarana fotsiny I Indy no safidiko! ary apetraho ny tantaranao momba ny antony nifidiananao an'i Indianapolis. Hametraka anao amin'ny mailaka fizaranay izahay miaraka amin'ny anaran'ny boky manaraka izay hovakinay ary rehefa hanaraka azy io izahay.
Amin'ny lafiny iray, i Shel Israel dia nanana fanaraha-maso dia ary nofoanana ny hanao consultant. Araka ny nametrahany azy, Hiresaka momba ny vola indram-bola aho. Misaotra manokana an'Andriamatoa Israel tamin'ny bokiny ary manome aingam-panahy olona vitsivitsy eto Indianapolis hitrandraka izany fotoana izany ho an'ny tenanay sy ho an'ny mpanjifanay. Manana mihoatra lavitra noho ny vidin'ny boky izahay!
14 Aogositra 2006 amin'ny 10:02 PM
Doug, tsara kokoa raha mijery ny Shel Israel isika, mangataka torohevitra aminao!
14 Aogositra 2006 amin'ny 11:53 PM
Misaotra noho ny teny soa sy ny plug asa, Doug. Toa kliobam-boky mahafinaritra izy io ary tena ilaina ny mahita ny ankamaroan'ny hevi-dehibe amin'ny boky resahina sy ampiasaina.